Zimbabwe Travels and Zimbabwe Safaris Victoria Falls, Mana Pools National Park, Hwange National Park, Malilangwe Wildlife Reserve
Hwange NP - tons of elephants in the dry season
Mana Pools - Paradise at the Zambezi river
The safari parks are without doubts amongst the best in Africa and the guides have a world-class reputation. Zimbabwe is a landlocked country situated between two great rivers: the mighty Zambezi cuts along its northern frontier, forming the border with Zambia, while the languid Limpopo forms the southern border with South Africa.
Highlights of a Zimbabwe trip are the famous Victoria Falls and safaris in the two fantastic National Parks Mana Pools and Hwange in the north, best extended with a stay in the lesser known Matusandona National Park at Lake Kariba and the Malilangwe Wildlife Reserve and Gonarezhou National Park in the south of the country.
Zimbabwe covers an area approximately that of Germany and has a population of about 17 million. After Zimbabwes substantial economic decline led by President Mugabe, the situation has improved since the introduction of the US dollar as local currency in 2009 and the final replacement of Mugabe in 2017. The country now attracts a growing number of visitors.
Zimbabwe is known as one of the most diverse and exciting safari destinations in Africa, blessed with stunning Parks such as Mana Pools National Park, Hwange National Park and the famous Victoria Falls, amongst others.